သွားအကြောထုတ်ကုသခြင်း (RCT) – D-Royal
သွားအကြောထုတ်ကုသခြင်း (RCT)အကြောင်း သိကောင်းစရာ
သွားအကြောထုတ်ကုသခြင်း (RCT) ဆိုသည်မှာ❓
သွားအမြစ်တွင်းပိုင်းက ပိုးစား၍ ရောင်းရမ်းကိုက်ခဲနေသော (သို့မဟုတ်) ပိုးစား၍ပုပ်သွားသော သွားအကြောအား သွားအကြောထုတ် ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ သွားအမြစ်တွင်းမှ ကုန်စင်အောင် ရှင်းလင်းဆေးကြောပီး သွားအမြစ်ထဲသို့ သွားအကြောတုလေးထည့်ကာ
???? သွားဂလိုင်ပေါက်ထဲသို့ အစာဝင်လျှင် ကိုက်ခဲသောသွားများနှင့် ဖိမိလျှင်နာသောသွားများ။
???? Accident တစ်ခုခုကြောင့် ဆိုးဆိုးရွားရွား ပဲ့သွားသောသွားများနှင့် အမာကိုက်ရင်း ပဲ့သွားသောသွားများ
???? အပူအအေးစသည့် အရည်များသောက်လျှင် ကျင်သွားသောသွားများ
???? သွားတိုက်တံအမာနှင့် ဘေးတံစောင်းတိုက်ခြင်းကြောင့် သွားခြေရင်းနားတွင် တဝက်လောက် ချိုင့်ဝင်နေသောသွားများ
RCT လုပ်တော့မည်ဆိုလျှင် ဆေးခန်းကိုဘယ်၂ခေါက်လာရပါသလဲ။ ????‍
ကျွန်တော်တို့ဆေးခန်းမှာ သွားအခြေအနေပေါ်မူတည်ပီး Single Visit Rct လုပ်နိုင်ပီးဖြစ်လို့ ဆေးခန်းကို ခနခနမလာနိုင်သူများအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာစေမှာဖြစ်ပါသည်။
တချို့ခက်သော အံသွားများအတွက်မှု ဆေးခန်းကို ၂ခေါက်သုံးခေါက် လာပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
RCT လုပ်ရင် အရမ်းနာကျင်မှုရှိပါသလား။ ????????????